Imvelaphi yeC Cornucopia kwiGreek Mythology
Inkcazo: I-cornucopia, ngokuqinisekileyo 'uphondo lwezinto ezininzi,' iya kwitafula lokubonga ngenxa yamazwi aseGrike. Uphondo lwaluye lwaba lulo lwebhokhwe olusetyenziswa ngumntwana uZeus. Kwibali likaZeus ebuntwaneni, uxelelwa ukuba wathunyelwa emqolombeni ukugcinwa ngokukhuselekileyo ukukhusela uyise uCronus ukuba angadli. Ngamanye amaxesha kuthiwa wayinakekelwa yibhokhwe egama linguAmalthea kwaye ngamanye amaxesha waxhaswa yi-nymph yegama elifanayo owamondla ubisi lweebhokhwe.
Ngethuba elusana, uZeus wenza into eyenziwa ngabanye abantwana. Ukufihla ingxolo kwaye ugcine uCronus ekufumaneni iprojekthi yakhe yomfazi ukukhusela unyana wakhe, u-Amalthea wabuza iiKiretes okanye iKorybantes ukuba zifike emqolombeni uZeyus afihlwe ngayo kwaye enze ingxolo eninzi.
Kukho iinguqulelo ezahlukeneyo zokuziphendukela kwe-cornucopia kwiphondo ehleli entloko yebhokhwe yokukhusela. Enye into yokuba ibhokhwe isisusa kuye ukuze ibonise uZeus; enye uZeus wayisusa kwaye wayibuyisela kwi-Amalthea ibhokhwe ethembise ininzi yayo; enye, ukuba yayivela entloko yonyango lomlambo.
I-cornucopia isoloko idityaniswe nodadekazi wesivuno, iDemeter, kodwa inxulumene nabanye oothixo, kubandakanywa nomntu we-Underworld unkulunkulu onotyebi, uPluto , ekubeni uphondo lubonakalisa ubuninzi.
Iphrofayili yeAjax: Hero Hero kwi-War War
Funda ngoBomfazi: Iingcamango, iinkolelo, iimfudu
Yiyiphi enye ininzi yeCompound Compound?
Ibutho lamaRoma eRiphabhliki yaseRoma
Uchungechunge (igrama kunye nezitayela zesigwebo)
Ukucwangcisa iZaziso kunye noMthetho weZakhiwo zoLuntu